मुख्यमन्त्री शेर धन राई लाई यौ’न शो’षण गरेको आ’रो’प लगाए पछि बालिका खड्का प’क्राउ!भिडियो सहित:: Mero Desh
मुख्यमन्त्री शेर धन राई लाई यौ’न शो’षण गरेको आ’रो’प लगाए पछि बालिका खड्का प’क्राउ!भिडियो सहित
Published on: ९ बैशाख २०७८, बिहीबार ०९:१५
एमालेको नयाँ पार्टी का’र्यालय थापाथलीबाट बालिका खड्का प’क्राउ परेकी छिन्।प्र’देश १ का मुख्यमन्त्री शेर धन राईलाई गालीगलौज गरेको आ’रो’पमा उनलाई प्र’हरी ले प’क्राउ गरेको हो।बिहीबार थापाथली सरेको पार्टी कार्या लयमा खड्का पुगेकी थिइन्। भिडियो अन्तिममा राखिए को छ !
खड्कालाई पार्टी का’र्यालय परिसरबाट प’क्राउ गरिएको महानगरीय प्र’हरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छखड्का लाई अहिले सिंहदरबार वृत्तमा राखिए को छ । मुख्यमन्त्री राई र खड्काबीच लामो समयदेखि विवाद छ। खड्काले राईलाई यौ’न शो’षण गरेको आ’रो’प लगाउँदै आएकी थिइन्।
यो पनि पढ्नुहोस! नेकपा एमालेको नुवाकोट जिल्ला कमि टी बैठक बसिरहँदा प्रहरीले बैठकस्थल छोड्न दबाब दिए को छ ।एमालेभित्रको विवादका का’रण लगाइएको ताला फोडेर एमालेका नुवाकोट अध्यक्ष नारायण खतिवडाको समूहले बैठक आयोजना गरेपछि प्रहरीले बैठकस्थल छोड् न दबाब दिएको हो।
नेकपा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष नारायण खतिवडा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन्।६५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा ४५ जना माधव नेपालको पक्षमा छन्। नुवाकोट मा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ।ओली पक्षले बद्री मैना लीलाई अध्यक्ष बनाएको छ। मैनाली २०७५ जेठ २ अघि जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष थिए।
‘विवाद भए पनि पार्टी कार्यालय दुवै पक्षले प्र’योग गरेका थियौं। तर अहिले भने शक्तिको आडमा हामीलाई निकाल्न खोजिएको छ, ’ एमाले नुवाकोटकी सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले सेतोपाटीसँग भनिन् , ’प्रहरीले तपाईंहरू यहाँ बाट जानुस् भनिरहेको छ। हामीले आवश्यक परेमा प्रति कार गर्ने तर बैठकस्थल नछोड्ने भनिरहेका छौं !